Nylas N1, mumwe mutengi kune Thunderbird | Linux Vakapindwa muropa
Sezvo Mozilla yakazivisa izvo yaizoderedza zvitsigiso kuThunderbird, vazhinji ndivo vatengi vakaedza kana vari kuedza kuwana nzvimbo mumusika uye munyika yekugovera. Nekudaro, isu tiri kutaura nhasi nezve imwe ye inonyanya kuzivikanwa asi panguva imwechete vatengi vanofarira izvo zvandakaona munguva pfupi yapfuura.
Nylas N1 ndiro zita reiyo email mutengi iyo inopa zvakada kufanana kana kupfuura Thunderbird, kunyangwe kana izvo zvauri kutsvaga zviri nyore, iyi email mutengi ndizvo zvauri kutsvaga. Nylas N1 iri nyore mutengi, ine chitarisiko chinooneka yakafanana chaizvo neMac Mail uye muchinjiko. Chokwadi, Nylas N1 mutengi anogona kuiswa paWindows, Mac OS uye Gnu / Linux, ichiita kuti ive yakanaka kune avo vanoshanda nemakomputa akati wandei ane akasiyana masystem anoshanda mazuva ese.
Uyezve Nylas N1 yakavhurika kune yekuvandudza nharaunda. Iyo software ndeye Open Source Saka pamusoro pekukwanisa kugadzirisa zvatinoda, tinogona zvakare kugadzira akasarudzika plugins ayo anopa mitsva mabasa kune iyo mail mutengi. Izvi zvakakosha nekuti ichatibvumidza isu kusanganisira chero basa, kungave chengetedzo kana chero imwe mhando yekushanda pasina kumirira sarudzo dzenheyo huru kana kambani.
Nylas N1 inotsigira ma plugins emahara zvachose
Pasina mubvunzo kutaura, Nylas N1 inoenderana ne iyo huru email mabasa, ndiko kuti, tichakwanisa kushandisa gmail yedu, maonero, yahoo, iCloud, Microsoft Exchange account, nezvimwe ... Zvino, hatichakwanise kushandisa IMAP account kana SMTP tsamba, zvirevo zvekare izvo vashoma vedu vanoshandisa zuva redu kune zuva hupenyu.
Kuti tigoisa uyu mutengi ndiyo system yedu, isu tinofanirwa kutanga tave nekugovera izvo shandisa Deb package kana kukundikana izvo, ziva kupfuudza madhiri mapakeji kune mamwe mapuratifomu. Kana izvi zvapera, tinoenda kune izvi link uye isu tinotora pasi rebhegi. Vamwe vese muchaziva zvekuita, asi tangai nemurairo
Ini pachangu, mutengi uyu andishamisa nekuti ndeimwe yeakanaka kwazvo uye akapusa makasitoma andakawana eGnu / Linux, zvekuti mumwe wevatengi vakafanana vandaona ndiye anoshandiswa muElementary OS, hurongwa hunotsvaga runako. Panyaya yekushanda, chokwadi ndechekuti inopa zvakafanana neThunderbird, zvirinani izvo vashandisi vazhinji vanoshandisa zuva nezuva Unofungei? Iwe unofungei nezve Nylas N1?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Nylas N1, imwe nzira mutengi kune Thunderbird
Ndakaiisa pane Debian KDE, uye inoshanda zvakakwana. Ini ndawedzera gmail uye chiitiko chakasiyana zvachose neThunderbird.
Uye kune rimwe divi, makorokoto angu e2016. Enderera mberi, Linuxadictos! :-)
Chinyorwa chinonakidza. Chinhu chega chandingade kuziva ndechekuti, sekureva kwako, zvimisikidzwa izvozvi zvinoshandiswa kutumira nekutambira tsamba. Kunyanya kubva kune "zvakawedzera" nharembozha, senge malaptop, mapiritsi, nezvimwe.
Mhoroi, ndakawana iko kukanganisa. Pane mumwe munhu angandibatsira here. Ndatenda
dpkg: kukanganisa kugadzirisa N1.deb (-install):
package package (amd64) haifanane nesisitimu (i386)
Izvo zvinosiririsa zvinongova muma 64bits!
giggleguttsMumwe munhu akadaro
"Zvino, hatichakwanise kushandisa maIMAP account kana SMTP tsamba, zvirevo zvekare izvo vashoma vedu vanoshandisa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva."
Zvakanaka zvichave mune zvakafanana chokwadi
Pindura kune giggleguttsSomeone
Chokwadi. Ini zvakare ndine account yekambani ine IMAP account uye ini ndinoona kuti N1 inokutendera kuti uigadzirise, chandisina kuwana ndechekuti inogamuchira iyo data inoitwa nevamwe vatengi. Anoramba achifunga opedzisira oti nguva yakwana, handizive kuti iko kukanganisa kuri kupi.
Pindura kune yakanyanya kunaka
Haufanire kutengesa, rezenisi, kubvarura, kugadzirisa, kugovera, kuteedzera, kubereka, kufambisa, kuratidza pachena, kuita pachena, kushambadza, kugadzirisa, kugadzirisa, kugadzira zvigadzirwa kubva, kana neimwe nzira kushandisa chero zvirimo ndeyako, (i) pasina mvumo yevaridzi kana imwe kodzero inoshanda, uye (ii) nenzira ipi neipi inotyora kodzero yechitatu yevatatu.
zvinoenderana nerezinesi kana iri yemahara, kunze kwekungove yakajairika troll hwindo $$$$$ ero iyo inoda kukamura senguva dzose :)
heino chinongedzo cheN1 rezinesi
Yakanaka kwazvo mukugadzira uye kugadzirisa asi kubuntu 14.04 zvinondipa matambudziko. Kushandiswa kwakanyanyisa kwecp uye gondohwe, izvo pasina kuverenga iko kupunzika kwesisitimu. Yakaiswa uye kubviswa. Ini ndinonamira neThunderbird uye Geary. Zvinonyadzisa nekuti zvinotaridzika zvakanaka.
Chairo troll hwindo $$$$$ ero?
Hausi wakapusa zvakanyanya nekuti hauna kudzidzisa.
Rezinesi remahara rinobva kuN1, iyo nylas software webhu kuwedzeredza (uye izvi hazvisi zvemahara zvachose, zvandakateedzera kare zvinobva kune rako rezinesi) Uye iyo N1 haishande isina nylas.
Zviverengere pachako, kana uchigona kuverenga, hongu: https://nylas.com/terms/
Iwe unokanganisa sevhisi nesoftware: https://www.nylas.com/N1/faq
dhizaini haina kunyatsoenderana nePlasma, uye chandisingafarire nezve nylas ndechekuti maemail ese anopinda nepaseva yavo, iyo isiri openource, uye hazviite sekunge vane chinangwa chekuivhura kuitira kuti "vasavadze matrust. ".
Camilo Olivares akadaro
Yakanakisa mupiro, thunderbird haina kundikurudzira, uye geary haina kuziva yangu imap account. Zvese zvinoshanda zvakanaka neNylas paUbuntu 14.04 LTS
Pindura kuna Camilo Olivares
Zvakanakisa, ndanga ndichitsvaga chakadai chakadai kwenguva yakareba, maita basa shamwari.
Julio Falcón Lucero akadaro
Parizvino, Thunderbird ichiri sarudzo iri nani, Nylas inokumanikidza kuti ubatanidzwe kunetiweki yayo, haina mikana yekusefa maemail, hapana kubatana nemakarenda, zvinokuratidza maemail senge gmail, cheni yese yehukama maemail mune rimwe chete, zvakaoma kuziva kuti ndeipi yekupedzisira, yekutanga, yekutanga ... Inonakidza, asi haina zvakawanda, havana mapulagi izvozvi, inoramba yakanamatira, inotora ndangariro zhinji, inovhura zviitiko zvakawanda ... kubvisa Nylas Mail ... isu tichafanirwa kudzokera kumashure kuti tinoedza mune imwe nguva zvakare.
Pindura kuna Julio Falcón Lucero
Solus 1.0 OS inowanikwa